भोट माग्न हिडेकी रेणु दाहाललाई स्थानीयको प्रश्न, 'भोट दिएकै हो नि, च्यात्नुभो ! अव किन दिने ? फेरि च्यात्नालाई ?'
ARCHIVE » भोट माग्न हिडेकी रेणु दाहाललाई स्थानीयको प्रश्न, 'भोट दिएकै हो नि, च्यात्नुभो ! अव किन दिने ? फेरि च्यात्नालाई ?'
भरतपुर - साउन २० गते पुन: निर्वाचन हुने भएपछि अहिले माओवादी- कांग्रेस गठबन्धन र एमाले कार्यकर्ताहरु भोट माग्न थालेका छन् ।
भोट माग्दा एमालेका कार्यकर्ताहरुलाई जनताले खास केहि नभनेपनि माओवादीका उम्मेदवारहरुलाई भने कडा प्रश्न गर्न थालेका छन् । 'पहिला भोट दिएकै हो नि, च्यात्नु भो, अव किन दिने', 'अव पनि भोट किन दिने र ?' लगायतका प्रश्नहरु जनताले सोध्न थालेका छन् ।
‘बैशाख २९ गते दिएको हाम्रो भोट च्यातेर फेरि किन भोट माग्न आउनुभयो ?’ भन्ने प्रश्न त धेरै जनताले सोधेको स्थानीयहरुकै भनाइ छ । पछिल्लो जनताको क्रेज हेर्दा रेणु दाहाललाई अफ्ट्यारो पर्ने धेरैले अड्कल काटेका छन्।